Dagaal saaka ka qarxay Duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobalka Sool
Laascaanood:-Wararka saaka naga soo gaaraya magaalada laascaanood ee xarunta gobalka Sool ayaa sheegaya in saaka dagaal culus uu ka qarxay duleedka magaalada kaas oo u dhexeeya Ciidamada maamulka S/land iyo ciidamo daacad u ah maamulka Khaatumo state waxaana uu dagaalku qarxay 6:30 subaxnimo.
Halgan.net oo khadka Tel kula xiriirtay goobjooge ku sugan duleedka Laascaanood ayaa sheegay in weli dagaalka uu socdo wuxuuna sheegay in uu dagaalka qarxay ka dib markiii ay ciidamo ka tirsan maamulka S/land ay weerar ku soo qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka Khaatumo state waxaa laga maqlayaa gudaha magaalada Laascaanood Madaafiic iyo hub ka culus ee la isku ridayo.
Dagaalka oo ah mid culus ayaa weli ka socda hareeraha degmada Laas-caanood mid ka mid ah saraakiisha Maamulka Khaatumo state ayaa sheegay in ay ka go,an tahay in ay la wareegaan magaalada Laascaanood oo ay heystaan buu yiri Maamulka S/land.
Magaalada Laasocaano ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaa qabsaday ciidamo daacad u ah Maamulka S/land sanadkii 2007-dii wixii ka danbeeyeyna waxaa ka socday kacdoon ay shacabka Laascaanood ku diidan yihiin Maamulka S/land waxayna dhigeen dhowr jeer banaanbaxyo rabshado wata oo ay ku diidan yihiin Maamulka S/land.
Wixii warar ah ee kasoo kordha dagaalka kala soco Halgan.net